Ezigbo omume Archives - GELN RELRAY R .R.
ịma mma Kwụsị ịdị arọ receipts Usoro ọgwụgwọ Mmekọahụ na mmekọrịta elekọta
Ozi 10 iziga iji nyere mmadụ aka inwe mmetụta ka mma
Ozi iri iji zipu inyere mmadu aka idi nke oma Imata otu esi akasi mmadu obi adighi adi mfe mgbe nile. Lee ozi iri nke izipu iji nyere onye ị hụrụ n'anya aka ịka mma! Mgbe ụfọdụ mgbe mmadụ ...
Obodo ndi Superkomen ndi Obodo Morocco - Video
Onye na-ese ihe nkiri: Bouchra Ijork Dị Elu na Ugwu Atlas dị na etiti Morocco bụ obodo ndị dịpụrụ adịpụ nke ụmụ nwanyị Amazigh na-achịkwa ya kpamkpam, nsonaazụ nke oke ala dị n'etiti ndị obodo mepere emepe na ime obodo, nke volatility nke Moroccan…
Mkpali na French - TU EN ES CAPABLE - Video
Ọtụtụ n’ime anyị na-ebi ndụ anyị oge ọ bụla n’amaghị ama. Anyị na-atụ egwu ịmalite, anyị enweghịzi ntụkwasị obi nke onwe. Ma mara na i nwere ike ime ihe ọ bụla. Ikwenyeghi ya? Lelee nke a ... ► Kwere na onwe gị. …
Ndụmọdụ: Afọ Flat na Izu - Video
Iji tufuo ihe ọ bụla site na Sympa, denye aha!: Https://goo.gl/6E4Xna ---------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 'mmega ahụ? Etu ị ga-esi belata ọnụ ọgụgụ gị na ...
Ihe omuma nke Chineke, ihe di nkpa!
Chinde	 August 22, 2020 0
Ndi Abasi odu? Ndị a bụ arụmụka isii dị mfe ma kwụ ọtọ na-egosipụta okwukwe na Chineke dị adị ugbu a. You bụ otu n'ime ndị ahụ ga-achọ ịnwe ihe akaebe nke ịdị adị nke Chineke kpamkpam? Enweghị nrụgide. Ọ bụghị…
Ndụmọdụ 4 maka ịtufu larịị n'oge ezumike
Chinde	 August 10, 2020 0
Ọ bụ akpatre ndaeyo ezumike! Ohere iji zuru ike izu ike mgbe nsogbu nke ọnwa ndị na-adịbeghị anya mana anyị agaghị echefu ihe mmụta. Ndị a bụ ndụmọdụ 5 iji nọrọ na ọkwa! Ezigbo ihu igwe na-abanye n'ikpeazụ! Eh ee,…
Nchegbu na-esiri m ike ịnagide ma ị maara na nwamba nwere ike maa ...
Nchegbu na-esiri m ike ịnagide kama ị maara na nwamba nwere ike ịjụ ya ume? Nchegbu na-esiri m ike ịnagide kama ị maara na nwamba nwere ike ịjụ ya ume? Trendy na-akọwa ...
Àmà: mmebi nke ọbụbụenyi na-egbu egbu
Akaebe: mmebi nke ọbụbụenyi na-egbu egbu Ọ bụrụgodi na anyị na-echezọ ya, ọbụbụenyi nwere ike imebi emebi dịka ihunanya na ọbụlagodi mgbe ọ bụ ndị kacha gị nso na-eji mmetụta gị egwu egwu. ……
Na ụkpụrụ, ọbụlagodi na ezigbo ahụike, ikpu ka nwere ntakịrị isi. Otú ọ dị, ọ bụrụ na isi ísì a dị ike ma ọ bụ na-adịghị mma, ọ nwere ike ịbụ nsogbu ahụike karị ma ọ bụrụ na ndị ọzọ na-esonyere ya ...